Ucacisa njani uBeto O'Rourke eMelika - Ezopolitiko
Ucacisa njani uBeto O'Rourke eMelika
Kwintsimi enodaka phakathi kohola wendlela, isikhululo segesi, kunye nepaki erhuqwayo ngeCawa ngoDisemba, uMmeli waseMelika uBeto O'Rourke wema phantsi kwepergola ephethe imakrofoni ezandleni zakhe walinda. Malunga neenyawo ezili-10, umfana waqala umbuzo wakhe ngokudwelisa uluhlu lwamatyala olwaziswe kwi-115th Congress ngamaDemokhrasi axhasa izizathu ezahlukeneyo zokuqhubela phambili: isindululo sokunyusa umvuzo omncinci, i-Medicare-for-All bill, kunye Umthetho oyilwayo wokunciphisa ukubandakanyeka komkhosi waseMelika kuMbindi Mpuma. Nangona enguMdemokhrasi, u-O'Rourke akazange abolekise ngegama lakhe nakubani na njenge-cosponsor.
Ungalenza ityala kum, yatsho le ndoda, kutheni ungumgqatswa ongcono kunomchasi wakho weenkqubela phambili njengam?
Impendulo ka-O'Rourke yathatha ngaphezulu kwemizuzu emibini, eneempendulo ezineenkcukacha kwisikhalazo ngasinye, kodwa waqala ngokuphendula umbuzo obanzi wale ndoda.
Andinakuba ngumgqatswa ofanelekileyo kuwe, ukunyaniseka, utshilo u-O'Rourke. Unokukhetha omnye umntu, kwaye yindlela ekufuneka idemokhrasi yethu isebenze ngayo.
Utshintshiselwano yayingumbuzo wokuqala weendibano zedolophu-eseColumbus, eTexas, nangona kwakungekho holo, yayiliqela nje lendlela yeenkampu kwipaki erhuqwayo. Xa u-O'Rourke ethetha nesihlwele, uphuma okomnqamlezo phakathi komntu ohlekisayo ongenabuchule kunye nommeli we-UN.
Umntu oneminyaka engama-45 ubudala usebenzela ukutyunjwa kweDemokhrasi kwi-Senate yase-US ngo-2018, kwaye uyintandokazi engavumelekanga. I-congressman yekota emithathu evela e-El Paso ikhokele okhuphisana naye osondeleyo, oneminyaka engama-32 yobusoshiyali kunye nomntu omtsha kwezopolitiko ogama linguSema Hernandez, 73-19 kuvavanyo lweProjekthi yezoPolitiko eTexas . Ukuba u-O'Rourke uphumelele u-Matshi 6 wamabanga aphantsi, njengoko bekulindelekile, umchasi wakhe jikelele wolonyulo uya kuba lilungu le-senator junior, uTed Cruz.
Ndicinga ukuba u-2018 yiplanethi eyahlukileyo kunaleyo [kwiminyaka edlulileyo]. Zininzi izinto ezahluke ngokusisiseko. —UU. Ummeli uBeto O'Rourke
Ukuwisa iRiphabhlikhi eyaziwayo kwilizwe lonke njengeCroz kwelona lizwe likhulu ngokuthembekileyo kubomvu kwimanyano iya kuba yimpumelelo yesizukulwana esinye kwiidemokhrasi. Ingayicaphukisa le nto, kodwa ukuba u-O'Rourke wayeza kuyikhupha, wayeza kuba sisikolo esincinci sabaphathiswa bezentando yesininzi abasele bephumelele ugqatso lomthetho kwilizwe liphela, mhlawumbi bekhokela indlela kwisithuba -Unyulo lomtshangatshangiso olunokuthi lubuyisele iCongress kulawulo lweDemokhrasi. Ukuba ulahlekile, uya kuba ngomnye uJon Ossoff, umkhulu weDemokhrasi owayebaleka exhaswa ngemali kwaye epapashwa kakhulu-kodwa engaphumeleli-kwiphulo leNdlu eGeorgia kunyaka ophelileyo.
Ngelixa u-O'Rourke ethatha imibuzo, umlawuli wezonxibelelwano, uChris Evans, wahamba umjikelezo wesihlwele-esasinabantu abambalwa ababekho- ngelixa usasaza ividiyo yomsitho bukhoma kuFacebook. Emva nje kwe-1 emva kwemini, yayiyividiyo yesithathu ukuba iphulo lika-O'Rourke lalithumele kuFacebook olomdaka, usuku olugqithisileyo, emva kokumiswa okufanayo eSealy ngaloo ntsasa kunye nemizuzu engama-45 yokuhamba kwedrive ukusuka eHouston ukuya eSalvador Indawo yokutyela eBrookshire emva kokuphuma kwelanga. Ukuphela kosuku, iphulo lika-O'Rourke laliza kuthumela iividiyo ezisixhenxe kuFacebook, eyokugqibela yayiyindaba yemizuzu emihlanu yeendaba ezivela kwi-Dallas-Fort Worth NBC ehambelana ne-O'Rourke emi ngaphandle kwe-Whataburger, ilungiselela ukuthatha kwangaphambili jog kunye nabaxhasi abambalwa. U-Evans waye ecaleni kwakhe efota ngalo lonke ixesha .
Uhambo lwangeCawa lwalubandakanya ukubonakala nje esidlangalaleni, eSealy naseColumbus, kodwa kusuku olungaphambi kokubandakanya iindawo zokumisa ezili-11 kunye neevidiyo ezili-14 zeFacebook, bebonke ngaphezulu kweeyure ezintathu zemifanekiso. Ukufota okungaka, kunye nokudlulisa nayiphi na inkonzo yeseli abanokuyifumana, benze inani kwiibhetri zeefowuni, ucacisa uEvans. U-O'Rourke kunye nabasebenzi bakhe benza ifilimu kuyo nayiphi na ifowuni eneyona jusi ininzi, ukutshaja imoto emotweni ngokusekelwe kulowo ukufutshane no-zero. Xa konke okunye kusilele, baphula ibhetri yesilivere ephantse ilingane nobume beBhayibhile kaGidiyon, ngentambo yokutshaja ephuma epokothweni kaEvans iye kwifowuni yakhe njengomgca okwimpompo ye-insulin ephathekayo. Kubaluleke kakhulu kwiphulo lika-O'Rourke.
Emntwini okanye kwi-Intanethi, kunqabile ukubona umntu ofana no-O'Rourke eSealy okanye eColumbus. Iidemokhrasi zihlala zichitha ixesha lazo kwiindawo ezisemaphandleni zikarhulumente, hayi ngaphandle ehlathini.
YiRiphabliki egqithileyo apha, utshilo uPat Burns, usihlalo weAustin County Democratic Party. Intombi yam iya eBellville High School kwaye ayithandi ukuba abantu bazi ukuba singamaDemokhrasi. Abamelwane bam bangamaRiphabliki ngendlela engummangaliso, ngenxa yoko kuye ukuba afune ukuza apha yinto enkulu.
Kwimizamo yakhe yokubetha u-Cruz, u-O'Rourke uya kushukumisa zonke izandla, amange lonke usana, eme phantsi kwayo yonke into anokuyifumana, kwaye ahambise intetho yakhe kuye wonke umntu oya kumamela, nokuba ucinga ukuba bamfanele bamvotele okanye hayi.
Ngokungafaniyo neCroz, i-O'Rourke ikude nomfanekiso wesizwe. Ummeli weSithili seCongress saseTexas se-16, u-O'Rourke akabambanga mpumelelo kwezomthetho. Kwiminyaka emihlanu kwiCongress, ebengumxhasi ophambili wamatyala amabini nje kuphela awenze ukuba uvote phantsi.
Iipolitiki zeprojekthi yaseTexas zakutshanje kwi-O'Rourke, epapashwe ngoFebruwari , bonisa ukuba ngelixa uninzi lwabaphenduli lumjonga ngokungathandekiyo njengolungalunganga, eyona bloc inkulu-iipesenti ezingama-39-mhlawumbi yayingazange ive ngaye okanye ingenalo uluvo ngaye. Ibango lika-O'Rourke lodumo kukuba xa wayesemncinci wadlala kwiqela lomculo wepunk elibizwa ngokuba yiFoss ecaleni kukaCedric Bixler-Zavala, oqhubeke nokufumana kwiDrive-In nakwiMars Volta. Abantu bayakuthanda nokumthelekisa noJohn F. Kennedy , kuba mncinci, mhle, kwaye waseIreland waseMelika-uBeto, isiteketiso sobuntwana, mfutshane kuRobert.
U-O'Rourke ngunyana woMgwebi wase-El Paso County uPat O'Rourke, owabulawa kwingozi yebhayisekile ngo-2001. U-O'Rourke omncinci waya eWoodberry Forest School, kwisikolo sokulungiselela eVirginia, ngaphambi kokuba aphumelele e-Columbia ngo-1995 isidanga ngesiNgesi. (Wamthiya owamazibulo kubantwana bakhe abathathu u-Ulysses kuba wayemthanda IOdyssey Emva kokubuyela e-El Paso, u-O'Rourke waseka isitalato iStanton, uyilo lwewebhu kunye nenkampani yokubonisana, ngaphambi kokwenza i-foray yakhe yokuqala kwezopolitiko kwi-2005, kwakuloo nyaka watshata umfazi wakhe, u-Amy.
Uphumelele unyulo lwakhe lokuqala eneminyaka engama-32, ebetha u-Anthony Cobos osesikhundleni kwi-Democratic racing e-El Paso City Council. Kwiminyaka esixhenxe kamva, wathatha u-Silvestre Reyes, owayengu-Democrat owayenesigama esibhozo, kwi-primary kwiNdlu yabameli, kwaye waqhubeka nokuphumelela unyulo jikelele nge-2-to-1 margin phezu kweRiphabhlikhi uBarbara Carrasco, Ngelo xesha wajika ulawulo lweStanton Street waya kumkakhe.
U-O'Rourke unokuzithemba komntu ongazange aphulukane nolonyulo. Ngaphandle kwamashumi eminyaka obungqina bokuba uza kuphulukana noNovemba, ubona imeko yezopolitiko eguqukayo.
Ndicinga ukuba i-2018 yiplanethi eyahlukileyo kunaleyo [yeminyaka edlulileyo], ndatsho u-O'Rourke. Zininzi izinto ezahluke ngokusisiseko. Owona mahluko ubaluleke kakhulu kukuba kuninzi ukuzilungiselela kunye nokuzisebenzela ngokwakho eTexas. Abantu-kwaye eneneni abavulelwanga okanye bagxothiwe ngumbutho, okanye ubuhlakani, okanye kwa-ideology-bafuna ukwenza into elungileyo kwilizwe labo.
Andifuni ukwazi ukuba amaqela abo ekugxilwe kuwo athini, okanye iipolls zabo zibonisa, okanye abacebisi babo bavavanye ukuba ndiphinde apha. Ndifuna ukwazi ukuba yintoni esengqondweni yakho. —Beto O'Rourke
Ngaphezulu kweminyaka elishumi kwezopolitiko, u-O'Rourke uhlakulele umfanekiso we-crusading, kunye nomkhankaso onzima we-Democrat omncinci kunye ne-punk rocker yokungahloneli inkqubo yezopolitiko. Ngomntu, u-O'Rourke-omde kwaye onqabileyo, enobuso obude, obunama-angular kunye ne-penchant yeengubo eziluhlaza okwesibhakabhaka kunye nokutshiza izandla-kukukhumbuza uBarack Obama kuneJFK. Usebenzisa izikweko ze-rock-'n'-roll ukuchaza umgaqo-nkqubo: Umfazi kwiholo yedolophu yaseSealy wabuza u-O'Rourke ukuba uza kwahluka njani kungekuphela kumaRiphabhlikhi kodwa nasekumiseni iiDemokhrasi, kwaye u-O'Rourke uphendule ngokuthetha, njani ukukhangela umculo ongaphezulu, wafumana ipunk rock xa wayekwishumi elivisayo kwaye waqala iqela lakhe.
Into esasiyala, singaqondanga, kwaye ngekhe ndiyibeke ngolu hlobo, yayiyinkampani ye-rock-’n-roll, utshilo. Andikufuni, eNew York okanye e-LA, uthathe isigqibo sokuba ndiza kumamela ntoni e-El Paso. Kweli phulo siyala iipolitiki ezihlangeneyo, siyala ngokwenyani iminikelo yenkampani ehluzwe ngee-PACs, umdla okhethekileyo, ewe, abaphathi beqela. Andifuni ukwazi ukuba amaqela abo ekugxilwe kuwo athini, okanye iipolls zabo zibonisa, okanye abacebisi babo bavavanye ukuba ndiphinde apha. Ndifuna ukwazi ukuba yintoni esengqondweni yakho.
Abapolitiki abathetha njengabantu bangaphandle bangama-dime elineshumi elinesibini, kodwa e-O'Rourke, iiDemokhrasi zinomntu onokuxhasa lo mfanekiso ngembali yonyulo engoyiswanga kunye nengxelo yokubetha ababebambekile ngaphakathi kwiqela lakhe. Nokuba imvelaphi ye-O'Rourke imenza umntu wangaphandle: U-El ​​Paso ukude kumaziko emveli abemi kunye namandla; kukude eHouston njengokuba iChicago isuka ePhiladelphia.
Kodwa abaDemokhrasi bayaphuma baye kudibana no-O'Rourke xa esiza kubo, kwaye bayasixabisa isenzo.
Kubalulekile ukuba akwazi ukuza kuthatha imibuzo kuluntu, isitayela seholo yedolophu, utshilo uSihlalo weDemokhrasi yaseWaller County uRosa Harris. Uninzi lwabagqatswa alukulungelanga ukuzikhupha kwaye bajongane nabavoti, kwaye kunjalo. Unesibindi, ukrelekrele, kwaye ngokuqinisekileyo uyabona kwimicimbi.
Oko kuvakala ngathi yiphakheji yayo nayiphi na ipolitiki-ngakumbi kwabo balwa ngokuchasene neMoby-Dick yezikhundla zaseRiphabhlikhi.
Kwindalo eyahlukileyo, u-O'Rourke wayeza kubaleka ngokuchasene nomnye umntu ngelixa uCruz ejonge kwi-White House. U-Cruz wagqiba isibini kwiprayimari yase-Republican ngo-2016 emva kukaDonald Trump. Emva kokukhwela iti wave wave kwiNdlu yeeNgwevu ngo-2012 kwaye ilandela oko Intetho ye-Senate yeeyure ezingama-21 ehlekisa nge-Obamacare Ngo-2013, uye waba ngomnye wabapolitiki abalulutho kweli lizwe.
I-Cruz kulula ukuhlekisa. Umntu ahlala naye ekholejini, umbhali wesikrini uCraig Mazin, wenze ukuhlekisa ngendlu yeeNgwevu kumsebenzi wesibini . Ngexesha le-2016 yokuqala, emva koko umgqatswa uTrump watyhola utata ka-Cruz ka Ukubandakanyeka ekubulaweni kweJFK , kwaye ngelixa lonke ipolitiki yesimo esithile ivelisa amagqabantshintshi angathandekiyo kwi-intanethi, bambalwa abayihlazo elibalekayo elibatyhola ngokuba ngumbulali weZodiac . Nokuba inkwenkwezi yakhe yokwenza iifilator yeeyure ezingama-21 yayingaqhelekanga: Wayecaphula Amaqanda aluhlaza kunye noHam , kwaye, ngokwenkqubo yeSenate, intetho yakhe yayingeyiyo ifilibuster. (Isicelo sodliwanondlebe esithunyelwe kwiofisi kaCroz asiphendulwanga.)
Kodwa nangona i-Cruz idume kakhulu kwaye inamandla ngakumbi kune-O'Rourke, kwaye nangona iphumelele umdyarho wayo wokuqala weSenate ngamanqaku ayi-16, ayithandwa kakhulu kurhulumente: Amanani akhe angathandekiyo angama-40-42 , ngaphezulu kwesibini kwisithathu sabo bamjonga ngokungathandekiyo besithi bambona ngokungathandekiyo. Eso sithuba senza ukuba i-Cruz zombini ijolise ekulingweni kumaDemokhrasi kunye nomchasi otyhafisayo, ngakumbi eTexas, apho uMdemokhrasi engaphumelelanga kunyulo lukazwelonke ukusukela ngo-1994.
Kule minyaka ilishumi idlulileyo, ezopolitiko zeqela leDemokhrasi ziye zanyanzeliswa ngabagqatswa ngokomgaqo-ka-Obama, uHillary Clinton, kunye noBernie Sanders zonke ziphembelele iinkolo zobuntu. I-O'Rourke ngokuqinisekileyo inesisa ngokwaneleyo ukuba ikhuthaze eyayo: Uyakwazi ukuthetha namagcisa kunye noosomashishini ngokulinganayo ngaphandle kokuvakala ukuba baqhelisile okanye banganyanisekanga, kwaye imvelaphi yakhe eyahlukeneyo ithiyori imenza akwazi ukubhenela kuluhlu olubanzi lwabavoti. Kodwa ikwenza ukuba kubenzima ukuba acofe phantsi, ukuba akukho mgaqonkqubo ke kwifilosofi yezopolitiko.
Oko kungadlala kwi-O'Rourke. Ukuba bhetyebhetye kumgaqo-nkqubo kumvumela ukuba aphephe ukwahlula phakathi kwe-centrist okanye amaphiko e-liberal eqela, ukuba angathethi kwanto ngabavoti beRiphabhlikhi anokuzama ukuyenza. Ngenxa yemvelaphi yakhe yomculo, u-O'Rourke onamandla kunabo bonke ababhali bomculo: Nguye wenze i-Q & A nge Jikelezisa , kwaye kutshanje Ngenyanga yeTexas Inqaku lomgqatswa libizwa ngesihloko Ngaba uluhlu lokudlala lukaBeto O'Rourke lweNkxaso yePunk Rock yakhe?
Ukanti ungusomashishini we-Ivy League-ofundelekileyo osomfazi onomfazi ongumlawuli olawulayo kwisikolo somnqophiso, kunye nerekhodi lakhe lokuvota ngokungaguquguqukiyo iwela kwesona sithathu silondolozayo sendlu yeeDemokhrasi .
Kwindlela yomkhankaso, u-O'Rourke uhlala ebuyela kwimiba emithathu ephambili: ukhathalelo lwempilo yamagqala (usebenza kwikomiti yeNdlu yeenkonzo ezixhobileyo kunye nemicimbi yamagqala); ukufudukela kwelinye ilizwe (kusengqiqweni ngommeli osebenza esixekweni enobudlelwane obukhethekileyo kunye nommelwane wakhe ngaphesheya komda waseMexico); nokuphelisa imfazwe kwiziyobisi, ifuthe u-O'Rourke awandibalisela ngalo kwakutyelelo lomzi nomzi kufutshane neWichita Falls, malunga neeyure ezimbini emantla ntshona eDallas.
Phantse wonke umntu owayedidekile kwinkqubo yezolwaphulo-mthetho wayeqale wangena kule nkqubo ngokubanjwa kwentsangu, utshilo u-O'Rourke. Kwaye kwakukubi ngakumbi ukusuka apho. I-Texas yenye ye-12 ithi apho ubanjelwe ulwaphulo-mthetho olungenabundlobongela, sithatha nelayisensi yakho yokuqhuba. Ke uya njani emsebenzini, uyigqiba njani imfundo yakho, uluhoya njani usapho lwakho? Zithini izinto onokukhetha kuzo emva koko?
Olu luhlu lwemibuzo lunqwala umdla wakhe ongezelelweyo kwimicimbi yokuvalelwa kwabantu abaninzi, kwaye neqonga lakhe lokukhankasela ukuba kupheliswe iintolongo zabucala, kodwa kuthe cwaka kubundlobongela bamapolisa. (O'Rourke wagweba u-El Paso oyiNtloko yamaPolisa uGreg Allen Kunyaka ophelileyo xa uAllen wabiza iBlack Lives Matter njengeqela elinentiyo.) Kuqhelekile ukuba u-O'Rourke anqwale kwimibono yasekhohlo kodwa ayeke ukungena kuzo zonke ngokuthetha.
Ingqondo yam ngokubanzi kukuba kukho inani elifanelekileyo lokuzithemba kwi-Texas Democratic Party. -Josh Blank, Iprojekthi yezoPolitiko eTexas
U-O'Rourke ukhetha ukhetho kwaye uneepesenti ezili-100 ukusuka kubuzali obucwangcisiweyo, kodwa xa wayethetha ngempilo yokuzala eSealy naseColumbus, wakwenza oko ngokujongana nenqanaba lokusweleka koomama, hayi ukukhupha isisu. Enye indlela yamandla ilungile kwindalo esingqongileyo, kodwa ikwasebenza kakuhle kwezoqoqosho. Ukhathalelo lwempilo yamagqala omkhosi amvumela ukuba athethe ngendima karhulumente njengomboneleli ngenkathalo yezempilo ngelixa efuna ukuncitshiswa kongenelelo lomkhosi waseMelika phesheya kolwandle, konke ngaphandle kokuza njengehippie. Ujonge nje imikhosi.
Xa ndimbuza ukuba liphi ipolisi yombhobho wakhe, wayengandivumeli ukuba ndigqibe isigwebo sam ngaphambi kokutsiba.
Ndicinga ukuba oku kuyinyani kwaye ndiyayazi xa ndihamba eTexas kwaye ndimamele abantu abasemaphandleni, kwiRiphabhlikhi, kwidolophu encinci yaseTexas, kwidolophu enkulu yaseTexas eluhlaza okwesibhakabhaka, utshilo u-O'Rourke. Olu luvo lokuba wonke umntu kufuneka abe nakho ukubona ugqirha, kwaye nokuba uphile ngokwaneleyo ukuba wenze nantoni na ekufuneka uyenzile ebomini: ukugqiba izifundo zakho, ukusebenza loo msebenzi, ukuqala ishishini, ukubhala loo noveli, ayilunganga kwaphela emntwini, ilungile kurhulumente nakwilizwe. Ke, uthini umbono wam? Unonophelo lwempilo kwindalo iphela. Kwaye kusenokwenzeka ukuba oko kuya kubandakanya uhlobo lwenkqubo yokubhatala enye, ulwandiso lweMedare, mhlawumbi ukusuka apho ikhoyo ngoku ingama-65, yonke indlela eya ezantsi.
Lo mbono wavakala ngokuqinisekileyo usoshiyali. Ubuncinci iyenzile de wayichaza njengenkqubela phambili, inkqubo ye-bipartisan.
Okanye, ndivulekile ukuba umntu unendlela ebhetele yokwenza oku-kubandakanya ngakumbi amaRiphabhlikhi-ndivulelekile kumbono wabo wendlela yokufika apho, utshilo. Andiyi kuvumela ogqibeleleyo ukuba abe lutshaba lokulungileyo.
imidlalo namaqabane ayi
I-O'Rourke ayityikityanga kwi-HR 676, i-Medicare-for-All bill etsala i-121 ye-cosponsors ye-Democratic, kuba Wachaza kwiholo ledolophu kwiinyanga ezintandathu ezidlulileyo Umthetho osayilwayo uvumela ukubuyiselwa kwemali kwiMedicare kuphela kubaboneleli ngononophelo lwempilo olungenzi nzuzo, hayi ababoneleli babucala. Ukwandisa ukubuyiselwa kwemali kwi-Medicare, wathi, kuya kuvumela ukufikelela ngakumbi kunye nokuqhubeka kokhathalelo.
U-O'Rourke akathathi bipartisanship ngenxa yayo, kodwa ubonakala eyixabisile. Ngo-Matshi 2017, yena no-Will Hurd, ummeli weRiphabhlikhi ovela eSan Antonio, bafumana iinqwelomoya zabo zisiya eWashington zirhoxisiwe ngenxa yekhephu, ke bobabini baqesha imoto bahamba baya e D.C. , Ukusasaza oko bakubiza ngokuba yiCongressional Cannonball Qhuba yonke indlela. Ngelixa kwaqhutywa enye, enye yathatha imibuzo kuFacebook ngoku, kwaye bobabini bazukisa indibaniselwano yabo kunye nokuzimisela kwabo ukuwela indlela.
Andiyiyo inzululwazi yerokethi, kodwa ekuphela kwendlela onokuthi wenze ngayo into e-DC xa uneRiphabliki kulawulo oluninzi kwiNdlu nakwiNdlu yeeNgwevu kukusebenza namaRiphabhlikhi, ke ndiza kusebenza namaRiphabhlikhi, O'Rourke uxelelwe into evanithi ngokuthambile ngoMeyi.
Akukho nto iphosakeleyo ngokwabelana ngemoto neRiphabhlikhi, kodwa intshukumisa yamaDemokhrasi yokulalanisa iphazamise abaninzi ngasekhohlo. Kule minyaka ilishumi idlulileyo, iqela belisoloko liguqule ukoyiswa xa lijamelene neqela eliphikisayo lase-Republican eliphikisayo-iqela eliphikisayo eline-avatar u-O'Rourke. Cinga ngomzabalazo wexesha elide iidemokhrasi ziye zadlula kumlinganiso wesiqingatha njengoMthetho woKhathalelo ongenakufikeleleka ngelixa ubambe iNdlu yeWhite kunye nezindlu zombini zeCongress. Ngoku thelekisa loo nto nokwala kweRiphabhlikhi kwanokujonga umntu otyunjwe ngu-Obama kwisihlalo seNkundla ePhakamileyo esishiyileyo emva kokubhubha kuka-Antonin Scalia. Elinye iqela lihlala ngokwesiko elinye lishiye konke, kwaye le mfazwe ingalinganiyo isebenze kwinzuzo yamaRiphabhlikhi phantse kuwo onke amathuba.
AmaRiphabhlikhi aseTexas anelungelo lonyulo apha elihlala lithetha ukuba baqala umdyarho wokhetho jikelele malunga ne-10-point advantage ngaphezu kwayo nayiphi na iidemokhrasi, utshilo uJosh Blank, umphathi wezokuvota kunye nophando kwiProjekthi yezoPolitiko yaseTexas kwiYunivesithi yaseTexas eAustin .
Oko akuhlambanga ncam nabantu baseTexas besiya besiba bancinci kwaye beba mhlophe kancinci, kodwa abantu kunye nabavoti abafani. Cinga ngolonyulo lokugqibela lwaphakathi eTexas kwiminyaka emine eyadlulayo. Ngaphandle kwezigidi ezili-18.9 zeminyaka yokuvota , zizigidi ezili-14 kuphela — malunga nama-74 ekhulwini — ababebhalisele ukuvota. Kubo, zizigidi ezi-4.7 kuphela eziye zavela, okanye malunga nesithathu sabavoti ababhalisiweyo kunye nekota yenani labantu abavotayo ngokubanzi.
Inyani yile, ukuba usuka kubo bonke abavoti baseTexas uye kubavoti ababhalisiweyo, elo qela labantu liya lisiba yiRiphabliki ngakumbi, utshilo uBlank. Kwaye xa usiya kubavoti ababhalisileyo usiya kubavoti, elo qela liya lisiba yiRiphabliki ngakumbi. Yiyo le caatat efuna ukuqondwa xa ujonga nakuphi na ukuvota eTexas: Xa sijonga abavoti ababhalisiweyo nje, izakujongeka njengeDemokhrasi ngakumbi kunokuba ngubani oza kubonakala ngoMhla woNyulo.
[AbaseRiphabhlikhi] bayifumana kwakudala. Kwaye thina maDemokhrasi sawamkela umhlaba kubo, ngokoqobo umhlaba ophathekayo, iJografi, iPanhandle, emantla eTexas, empuma eTexas, idolophu encinci entshona Texas. Sithe nje, yeyakho, yithathe, asizukukhuphisana. —Beto O'Rourke
Ezinye zezinto ezenzekileyo-abavoti abadala badla ngokuvota ngakumbi kwaye bathambekele ngakumbi kulondolozo. Kodwa abanye kunjalo Iziphumo zezenzo zangabom . Kwiinyanga ezintandathu ezidlulileyo, iTexas ilahlekelwe ngumthetho osemthethweni ngokuchasene ne Isicwangciso sokumiswa ngokutsha kunye nocalucalulo Umthetho wesazisi wokuvota , zombini ukuyilwa kwendlu yowiso-mthetho ekhokelwa yiRiphabhlikhi. (Omabini la matyala awasombululwa njengoko ehamba kwizibheno.)
Isiphumo kukuba xa iivoti ezizizigidi ezi-4.7 zagqitywa kugqatso loburhulumente luka-2014, iRiphabhlikhi uGreg Abbott wabetha umgqatswa weDemokhrasi uWendy Davis iipesenti ezingama-59 ukuya kwiipesenti ezingama-39, umahluko phantse wesigidi sevoti.
NgoJuni 2013, uDavis, owayelilungu lesenethi ngoko, wabanjwa i-filibuster yeeyure ezili-11 ngokuchasene nomthetho osayilwayo oya kunciphisa amalungelo okuqhomfa, kwaye ngokwenza oko waba lilizwe lezopolitiko. U-O'Rourke wambiza njengomntu onamandla, okhuthazayo, omangalisayo. USandra Bullock unjalo uxelwe ukuba uza kudlala uDavis kumdlalo bhanyabhanya . Kwaye u nge- $ 40 yezigidi zokuchitha kunye neqela lesizwe labaphuphi beDemokhrasi labacebisi, watyumka, waphulukana no-Abbott ngamanqaku angama-20. Indawo yokulwa eTexas, iqela elasekwa ngulowo wayesebenza ngephulo lika-Obama ngenjongo yokuguqula iTexas luhlaza okwesibhakabhaka, Isilele ukubamba inani kwiindawo ezihlwempuzekileyo zeDemokhrasi , ulungiselela kwangaphambili ukugxeka okukhulu ukungaphumeleli kwephulo likaClinton lokungavoti abavoti kwi2016 .
Ukongeza kwi-electoral-electoral advantage, i-Cruz sele ikhuphe i-O'Rourke ngaphezulu kwe-2-to-1, malunga ne-2.5-to-1 xa wena Inqaku lobunkokheli be-PAC ye-Cruz . Ngapha koko, ngelixa uCruz ebaleka phakathi kweseti esomeleleyo sabagqatswa beRiphabhlikhi kwi-ofisi yelizwe liphela-u-Abbott kunye ne-lieutenant yakhe irhuluneli, uDan Patrick, bobabini balwela ukuba baphinde bakhethwe-u-O'Rourke ngoyena mntu uhloniphekileyo kwilizwe lase Democratic.
UDavis akakhange afune i-ofisi yoluntu ukusukela oko woyiswa e-2014, kwaye abezopolitiko abaphezulu ngokukhawuleza be-Democratic kurhulumente nabo bahlala. Ummeli wase-US uJoaquin Castro walile ukucela umngeni ku-O'Rourke kumabanga aphantsi emva kokuba u-El Pasoan ebhengeze kuqala, kwaye uCastro angabaleka kwesinye isihlalo seTenate saseTexas, esabanjwa yiRiphabhlikhi uJohn Cornyn, ngo-2020. Iwele lakhe, uJulian Castro, owayesakuba liwele Usodolophu waseSan Antonio kunye nonobhala ka-Obama wezindlu kunye nophuhliso lwasedolophini, ixelwe Amehlo akhe ajonge i-White House.
Ingqondo yam ngokubanzi kukuba kukho inani elifanelekileyo lokuzithemba kwi-Texas Democratic Party, utshilo uBlank. Andizukukubiza ukuba yoyisiwe, kodwa ndicinga ukuba inyani kukuba ulilungu elonyuliweyo leNdlu okanye iNdlu yeeNgwevu okanye usodolophu okanye omnye uMdemokhrasi okwaziyo ukufumana indlela yabo yokungena e-Texas, mhlawumbi umhle ndikhuselekile kweso sihlalo. Ukuba ushiya eso sihlalo ukuya kucela umngeni kwiRiphabhlikhi ephezulu yokuvota, kukho ithuba elihle oza kuphulukana nalo.
Ngelixa kungenanto ibizwa ngokuba yiTexas Democrats ayinelisekanga, UCornyn wazivakalisa ngokuthe ngqo xa efunda ngobugqwetha buka-O'Rourke: Ndiyamazi uBeto. Kwaye ungumfana olungileyo. Kodwa ndicinga ukuba le yimishini yokuzibulala.
Ngaphandle kwazo zonke izinto ezisebenza ngokuchasene ne-O'Rourke, kukho indlela eya empumelelweni-kwaye ukusebenza kwayo kunokuthetha kakhulu nge-United States njengoko kusenza eTexas.
Kwizihlalo ezingama-36 zaseTexas kwiNdlu, ezingama-25 zibanjwe ngamaRiphabhlikhi. Umdemokhrasi wokugqibela ukuphumelela unyulo kwiNdlu yeeNgwevu eTexas yayinguLloyd Bentsen ngo-1988, into ethetha ukuba kukho abantu abakulungeleyo ukungenela isihlalo abangazange bazalwe okokugqibela xa uMdemokhrasi waphumelela unyulo eTexas kulo mzimba. AmaRiphabhlikhi abamba izihlalo ezingama-95 kwezi-150 kwiNdlu yoBameli kunye nezihlalo ezingama-20 ezingama-31 kwi-Senate.
Inani labantu baseTexas liyakhula malunga nomyinge ophindwe kabini labemi baseUnited States bebonke, kwaye njengoko ikhula, iya isiba mhlophe kancinci. I-Texas yayiphantse i-sibini kwisithathu emhlophe ngo-1980, kwaye ngo-2010, yayingama-45 epesenti emhlophe kuphela. Kwiminyaka embalwa ezayo, iiLatinos ziqikelelwa ukuba zibe lelona qela likhulu kurhulumente.
Ezo ntsingiselo ziyonwabisa kumaDemokhrasi, kuba kunyulo luka-2016 lukamongameli, uHillary Clinton waphumelela abavoti baseLatino ngamanqaku angama-36 kunye nabavoti base-Afrika baseMelika, abenza iipesenti eziyi-12.6 zeTexans ngo-2016, ngamanqaku angama-80. UTrump uphumelele abavoti abamhlophe ngamanqaku angama-21. Ewe, amaRiphabhlikhi ayazi kakuhle ngolu tshintsho-yiyo loo nto basebenzise ulawulo lwabo kwiNdlu yoWiso-mthetho kurhulumente ukuphinda abeke imigca yesithili kunye nokunciphisa abavoti. Oko kusasazeka kwakhona kuye kwadimaza abachasi beDemokhrasi kwi-ofisi yelizwe liphela, kuba zeziphi izithili ezixhomekeke kwiDemokhrasi ezihlala zithembele ngakumbi kwiDemokhrasi.
I-Texas Democratic Party ngokuqinisekileyo ibingenguye umgwebi nangaliphi na ixesha kwimemori yakutshanje, utshilo uBlank. Inqanaba labo lombutho kunye nokuzibandakanya kubonakala kusilela ngokubanzi. Ujonge olu gqatso kwaye uthi, mfana, akukho mntu ubalekayo kolu lonyulo. Unokuthi jonga igqwetha jikelele, ngubani obephantsi kwesimangalo ukususela [phakathi ku-2015] , kwaye akukho gqwetha ligqwetha jikelele lithembekileyo kwicala leDemokhrasi. Luhlobo lokucinga ngengqondo.
U-O'Rourke uhlala ezifumana ephikisana nokusekwa kweDemocratic Party. Emva kwayo yonke loo nto, uMdemokhrasi awaphumelela kwiNdlu ngo-2012, uReyes, wavunywa bobabini ngu-Obama kunye noBill Clinton, kwaye ngelixa u-O'Rourke evuma uHillary Clinton ngo-2016, wakwenza oko kuphela emva kokuba ugqatso lwakhe oluphambili nxamnye noSanders lwaluphelile. Akazikhathazi ngokufihla ukungathandi kwakhe utyekelo lweqela lokuvuma unyulo lwasekhaya.
[Abantu baseRiphabhlikhi] bayifumana kwakudala, utshilo u-O'Rourke. Kwaye thina maDemokhrasi sawamkela umhlaba kubo, ngokoqobo umhlaba ophathekayo, iJografi, iPanhandle, emantla eTexas, empuma eTexas, idolophu encinci entshona Texas. Sithe nje, yeyakho, yithathe, asizukukhuphisana. Asizukuvela, asizukulingana, uphumelela ngokungagqibekanga. Andazi kutheni. Ngokucacileyo khange ndibandakanyeke kwezi zigqibo.
Abacebisi abanamagama amakhulu khange bancede ukubaleka kuka-Davis gubernatorial, ke u-O'Rourke wagcwalisa iphulo lakhe labasebenzi abaphezulu nge-El Pasoans kwaye uya kwindlu ngendlu kangangoko anako. Umphathi wephulo u-Jody Casey ujoyine iqela emva kweminyaka eyi-18 e-General Electric, uninzi lwayo e-El Paso, kwaye akazange akhe aqhube iphulo kwilizwe liphela. Umlawuli wezopolitiko uJoe Moody ngummeli welizwe, naye uvela e-El Paso.
Kubekho inguqulelo [yezoqoqosho olukhohlisayo] kwezopolitiko; Ujolise phezulu kwelo tikiti kwaye izinto ezintle ziya kwenzeka, utshilo u-O'Rourke. Kuthekani ukuba sihamba ngenye indlela kwaye sijolise kwabo bakuseengcanjini zengcambu, isitalato, kwinqanaba lendlu ngendlu? Ndicinga ukuba xa sisenza loo nto, siza kubona into emangalisa ngokwenene inyuka iye phezulu.
U-O'Rourke uthe sele ezibona iziqhamo zale ndlela ngendlela yomdla owandileyo ovela kubaququzeleli beDemokhrasi balapha kunye nabaphuma kwiiholo zakhe zedolophu.
Ndicinga ukuba oko kukubonisa into eyahluke mpela [kwimikhankaso edlulileyo], kunye nokuba siseHenderson okanye ePineland okanye eJasper izolo, utshilo u-O'Rourke. Isizathu sokuba abantu abaninzi bavele kwezi ndawo kungenxa yokuba bambalwa abagqatswa abakhe bavela ngaphambili, kwaye bahlawula imbeko esisiseko kunye nembeko yokuzazisa nje emva koko bamamele.
Esi sicwangciso sinobuhle bezinto ezintsha, kwaye into eyenziwa ngabaDemokhrasi ngaphambili yayingasebenzi. Kwaye, kudala ulonwabo phakathi kwabagqatswa bendawo kunye nabaququzeleli abangakhange babone umgqatswa weSenethi ngobuqu kumashumi eminyaka.
Ndicinga ukuba angaba nefomula efanelekileyo. Kuza kuba nzima, kodwa kunokwenzeka, utshilo uBurns, usihlalo we-Austin County Democratic Party. Ndicinga ukuba uyiqhuba ngendlela eyiyo. Uvelisa inzondelelo-ayisiyiyo indibaniselwano, iphulo lokuya ezantsi. Eli liphulo labantu, kwaye kuphela kwendlela eya kusebenza ngayo.
Malunga neyure emva kokuba u-O'Rourke eshiye indawo yokubhaka eBrookshire, uBurns wamazisa kwisihlwele esimalunga ne-100 kwipaki kamasipala eSealy, ehleli eAustin County. (Ngokudidayo, isixeko saseAustin siseTravis County, ngelixa iAustin County inendawo enentshona yeHouston enabahlali abamalunga nama-30,000. ITexas ineenqila ezingama-254, ngaphezulu kwalo naliphi na elinye ilizwe.)
Isihlwele sika-O'Rourke eSealy simi kunye kwisilayidi sekhonkrithi phantsi kophahla lwentsimbi-indawo yokufihla ipiknikhi ngaphezulu kwepergola kule meko-njengoko wayebeka ityala lakhe kwaye ekhomba abagqatswa bendawo ababekhona, kubandakanya uTami Walker, igqwetha lendawo elalibaleka KwiCongress kwiSithili se-10, esiye kwiRiphabhlikhi ngamanqaku ali-19 ngo-2016 nangama-28 amanqaku ngo-2014.
[Uhambo lwe-O'Rourke] lunceda kakhulu, kuba abantu baziva benomdla ngokwaneleyo ukuba baye kuvota kumabanga aphambili, utshilo uWalker. Ingxaki enkulu eTexas kukuba imeko yokungavoti-ayisiyombuso ubomvu, yindawo yokungavoti. Ke umdla kunye nothando oluveliswe kwilizwe lonke linceda nje bonke abaviwa abaphantsi.
Ukwenza abantu baphume baye kuvota yinxalenye yedabi. Nawuphi na umdlalo womhlaba ufuna ukuba abantu bavolontiye, kwaye kwiindawo ezinje ngeSealy, kunzima ngokwaneleyo ukuba abantu bavume ukuba bangamaDemokhrasi esidlangalaleni, kungasathethwa ke ukuba kukhethwe omnye.
UTrump uphumelele le ndawo ngo-80-20, utshilo uBurns. Sasinomgqatswa olunge ngokwenyani waseburhulumenteni owayekhankasela kakhulu, kwaye satshaya. KwiNqila yaseAustin, ugcina intloko yakho phantsi, kwaye awuxeleli nyani abantu ukuba uyiDemokhrasi.
Asinguye wonke umntu kwiholo ledolophu owayenguDemokhrasi — umntu othile wabuza omnye wabancedisi baka-O'Rourke ukuba bangafumana amaRiphabhlikhi kwizitikha zeBeto bumper ezishicilelweyo- kodwa abo bazimayo babesusela kulutsha ukuya kubantu abadala, ukusuka kubafundi beekholeji abaneenwele ezidayiweyo kunye noBernie Sanders T -ihempe kwabo bathathe umhlala-phantsi benxibe i-Vietnam Veteran baseball caps, kwaye babuza imibuzo malunga nezihloko ezivela ekungathathi cala komnatha ukuya kwikamva lamandla omoya ukuba kutheni u-O'Rourke engatyikityanga kwi-bill yoMmeli weDemokhrasi u-Al Green yazisa amanqaku okuphambuka ngokuchasene neTrump .
Kuya kuba yinto ephawuleka kakhulu ukuba nayiphi na i-Democrat ingaphumelela kwilizwe lonke kwi-2018, itsho i-Blank Project yase-Texas. Ukuba uMdemokhrasi uphumelela kwilizwe liphela ngo-2018, kuya kufuneka ucinge ukuba iiDemokhrasi zithathe iNdlu ngokulula, zithathe iSenethi, kwaye ngenene baxhamle kunyulo olukhulu.
Nangona kunjalo, ukoyiswa kuka-Roy Moore e-Alabama e-Alabama kumise i-Cruz njenge-bogeyman elandelayo ye-Republican ukuba idilizwe, kwaye njenge-Gqwetha Jikelele uJeff Sessions lifuna ukubuyisa iinzame zokurhoxisa intsangu kwinqanaba likarhulumente, ulawulo lukaTrump luya kumcimbi u-O. URourke unesikhundla esiqinileyo, kwaye Isikhundla esixhaswa yinkoliso yeeTekisi .
Ingxaki enkulu eTexas kukuba imeko yokungavoti-ayisiyombuso ubomvu, yindawo yokungavoti. —Umgqatswa wenkonzo yeTexas uTami Walker
Nditsho nasemva phantse konyaka wokukhankasa kunye namakhulu eebhetri zeeselfowuni ezifileyo kunye nohambo lokuya kwindawo ezibhakiweyo zendlela, iphulo alikaqali. I-poll yangaphakathi ye-Cruz ibonisa abakwizikhundla zangoku ngamanqaku ali-18, nangona ipholothi yeqela elisekwe kwicala lezemali lokulungisa iqela lezopolitiko i-End Citizens United uno-O'Rourke kwisithuba sesibhozo . U-O'Rourke usasokola ukukhupha igama lakhe, nangona likho ixesha lokwenza umhlaba.
Abantu bathambekele ekubeni nolindelo olungeyonyani lokuchongwa kwegama kwezopolitiko, kwaye ngakumbi ngeli xesha, utshilo uBlank. I-avareji yakho ye-Texan icinge phantse hayi kwaphela malunga nonyulo luka-2018 lweSenate eTexas. Ke ukuba sijonga ngokwembali, eyona nto inomdla kakhulu kwidatha yethu yokuvota kukuba ngoJuni ka-2017, uBeto O'Rourke wayesaziwa kwiiTeans ezininzi njengoWendy Davis ngoJuni ka-2013, eyayilungile emva kwefilibuster yakhe.
Kwelinye icala, u-O'Rourke uhambelana no-Davis nangona engenalo ibali leendaba zesizwe elijikeleze yena, kodwa kwelinye icala ebengekaphuculi kwindlela yokusebenza komgqatswa ophulukene neevoti eziphantse zafikelela kwisigidi.
Iiposta kunye ne logo yeephulo ze-O'Rourke zimnyama namhlophe, hayi imveli eluhlaza okwesibhakabhaka. Uyonwabile ukushiya isazisi sakhe samaqela ngaphandle kwaso ngaphandle kokuba ebuziwe. Kwaye iqonga lakhe lakhiwe impendulo yeholo enye yedolophu ngexesha.
Kodwa ngaba uyi-punk rocker okanye usomashishini? Umvukeli owadelela u-Obama kunye noClintons okanye owowiso mthetho ngerekhodi lokuvota lekhulu? Umgqatswa othembisa ukuba ugqibelele ngekhe abe lutshaba lokulungileyo xa kufikwa ekulandeleni ukhathalelo lwempilo kwindalo iphela okanye kwi-congressman engazukungena kwi-Medicare-for-All ngenxa yomcimbi onembuyekezo yogqirha?
Ndimi esihlweleni kwiholo yedolophu yaseSealy, ndachukumiseka ngumyalelo ka-O'Rourke wemicimbi kunye nokuziphatha okuhle. Kodwa ndahlala ndithandabuza, hayi nje njengentatheli kodwa njengomvoti waseTexas, ukuba angenza nantoni na ngaphandle kokuthetha umdlalo olungileyo ukuba unyuliwe.
Emva koko wathatha umbuzo kumculi owathembela kwi-intanethi evulekileyo ukuze aphile. Le ndoda, ngexesha lokuphakama kobushushu bukaDisemba ngaphezulu komthetho wokungathathi cala kwe-FCC, wabuza u-O'Rourke ukuba wenzani ukugcina ukungathathi cala komnatha. U-O'Rourke wabeka inkqubo apho iCongress ingathintela isigwebo se-FCC, nento anokuyenza ngokwakhe emva koko wabongoza abantu kwisihlwele ukuba banxibelelane ne-congressman yabo, u-Republican uMichael McCaul, kwaye babeke uxinzelelo ku-McCaul ukuba ancede ukugqitha I-FCC, kuba uxinzelelo olunje yile nto ibumba i-ajenda yendibano.
Akukho nto inkulu, inzima, ibalulekileyo eyakha yenzeka kweli lizwe ngenxa yokukhanyiselwa kwabantu abakwizikhundla zentembeko yoluntu, utshilo u-O'Rourke.
La mazwi ayengathembeki, ngakumbi evela kwilungu leNdlu yabaMeli, kangangokuba kwakuthuthuzela kakhulu ukuva kuthethwa ngokuvakalayo. Mhlawumbi u-O'Rourke akazukuqinisekisa ubuninzi babavoti baseTexas ukuba ufanelekile, kodwa wenza konke okusemandleni ukubenza baqiniseke ukuba umamele.
ncaa ibhola 14 iquka
Iincwadi zomsindo zeroy dotrice
UTaylor Swift lixoki
iinkozi amaphupha namaphupha amabi
ukubuyela kumdlalo webruce
ukuthanda igorha hbo
ubuxoki obukhulu obukhulu beseleste